Beesha Caalamka oo walaac ka muujiyay arrintii ka dhacday Baarlamaanka Federaalka – Kalfadhi
Saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka, ayaa maanta soo saaray war-saxaafadeed ay ku muujinayaan walaacooda ku aadan arrimaha siyaasadeed ee dhowaan soo kordhay, oo ay ku jirto arrintii ka dhacday Baarlamaanka Federaalka.
Gudoomiyaha golaha shacabka oo warbaahinta la hadlay kaddib kulankii Golaha ee todobaadkan ayaa sheegay in cod la qaaday ka dib 170 xildhibaan ay kalsoonadii kala laabteen xukuumadda Xasan cali Kheyre halka ay diideen 8 xildhibaan.
Halkan ka akhriso war-saxaafadeeda..
Isku-day kasta oo ka yimaada hal dhinac oo ka mid ah saamilleyda oo isku daya inuu keligiis dadka kale ku qasbo noocyo doorasho wuxuu noqon doonaa mid aan sharciyad lahayn lamana dhaqangelin karo haddii uusan helin taageerada lagama maarmaanka ah ee saamilleyda kale. Saaxiibadu waxay si dhow ula socon doonaan waxyaabaha dhici doona ee soo socda.
In go’aan lagu gaaro u-heelanaanta arrimaha qaran ee hortabinta leh ee lagu heshiiyay iyo in arrimaha lagu xalliyo wadahadal iyo isu-tanaasul waxay muhiim u yihiin sii socoshada taageerada caalamiga ah ee la siiyo Soomaaliya ee heerarka hadda ay tahay.